अमेरिकामा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दै, एकैदिनमा २ हजार बढिको मृत्यु ! – Sagarmatha Online News Portal
अमेरिकामा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दै, एकैदिनमा २ हजार बढिको मृत्यु !
काठमाडौं । विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)बाट पछिल्लो समय विश्वका शक्तिशाली देशहरुलाई बढि प्रभावित बनाएको छ ।
वर्ल्डओमिटर्स इन्फोका अनुसार हालसम्म कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको संख्या शनिबार विहान ८ बजेसम्म १६ लाख ९९ हजार ६ सय २८ जना पुगेको छ । संक्रमितमध्ये मृत्यु हुनेको संख्या १ लाख २ हजार ७ सय ३४ जना पुगेको छ । ३ लाख ७६ हजार ३ सय २५ जना भने निको भएर घर फर्किएका छन् । अझै १२ लाख २० हजार ५ सय ६९ जना उपचाररत छन् । उनीहरुमध्ये ४९ हजार ८ सय ३० जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भिर रहेको छ । पछिल्लो २४ घण्टाभित्रै ९४ हजार ६ सय २५ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्, भने ६ हजार ९ सय ७१ जनाको एकैदिनमा मृत्यु भएको छ ।
अमेरिकामा पछिल्लो २४ घण्टाभित्र सबैभन्दा बढि कोरोनाबाट नागरिकको मृत्यु भएको छ । ३ दिन यता कोरोनाबाट अमेरिकामा सबैभन्दा बढि मानिसको मृत्यु भएको हो । अमेरिकामा २ हजार ३५ जनाले गएको २४ घण्टाभित्र ज्यान गुमाएका छन् ।
हालसम्म अमेरिकामा मृत्यु हुनेको संख्या १८ हजार ७ सय ४७ जना पुगेको छ । संक्रमितको संख्या भने ५ लाख २ हजार ८ सय ७६ जना पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टाभित्रै ३३ हजार ७ सय ५२ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । २७ हजार ३ सय १४ जना भने निको भएर घर फर्किएका छन् । अझै ४ लाख ५६ हजार ८ सय १५ जना उपचाररत छन् । उनीहरुमध्ये १० हजार ९ सय १७ जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भिर रहेको छ ।
पछिल्लो २४ घण्टाभित्र सबैभन्दा बढि मृत्यु हुने देशको सूचीमा दोस्रो नम्बरमा फ्रान्स रहेको छ । फ्रान्समा पछिल्लो २४ घण्टाभित्र ९ हजार ८७ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
हालसम्मा फ्रान्समा कोरोना संक्रमितको संख्या १ लाख २४ हजार ८ सय ८९ जना पुगेको छ । उनीहरुमध्ये १३ हजार १ सय ९७ जनाको मृत्यु भएको छ । पछिल्लो २४ घण्टाभित्रै फ्रान्समा ७ हजार १ सय २० जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । २४ हजार ९ सय ३२ जना भने निको भएर घर फर्किएका छन् । अझै ८६ हजार ७ सय ४० जना उपचाररत छन् । उनीहरमध्ये ७ हजार ४ जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भिर रहेको छ ।
पछिल्लो २४ घण्टाभित्र सबैभन्दा बढि मृत्यु हुने देशको सूचीमा तेस्रो नम्बरमा बेलायत रहेको छ । बेलायतमा ९ सय ८० जनाले २४ घण्टाभित्र कोरोनाबाट ज्यान गुमाएका छन् ।
हालसम्म बेलायतमा कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको संख्या ७३ हजार ७ सय ५८ जना पुगेको छ । उनीहरुमध्ये अहिलेसम्म ८ हजार ९ सय ५८ जनाको मृत्यु भएको छ । पछिल्लो २४ घण्टाभित्रै बेलायतमा ८ हजार ६ सय ८१ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । ३ सय ३४ जना मात्रै निको भएर घर फर्किएका छन् । अझै ६४ हजार ४ सय ५६ जना उपचाररत छन् । उनीहरुमध्ये १ हजार ५ सय ५९ जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भिर रहेको छ ।
सबैभन्दा बढि मृत्यु हुने देशको सूचीमा चौथो नम्बरमा स्पेन परेको छ । पछिल्लो २४ घण्टाभित्र स्पेनमा ६ सय ३४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
हालसम्म स्पेनमा कोरोनाबाट संक्रमितको संख्या १ लाख ५८ हजार २ सय ७३ जना पुगेको छ । उनीहरुमध्ये १६ हजार ८१ जनाको मृत्यु भएको छ । स्पेनमा पछिल्लो २४ घण्टाभित्रै ५ हजार ५१ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । ५५ हजार ६ सय ६८ जना भने निको भएर घर फर्किएका छन् । अझै ८६ हजार ५ सय २४ जना उपचाररत छन् । उनीहरुमध्ये ७ हजार ३ सय ७१ जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भिर रहेको छ ।
ईटाली पछिल्लो २४ घण्टाभित्र सबैभन्दा बढि मृत्यु हुने देशको पाँचौं नम्बरमा परेको छ । ईटालीमा पछिल्लो समयमा ५ सय ७० जनाको मृत्यु भएको छ ।
हालसम्म ईटालीमा कोरोना संक्रमितको संख्या १ लाख ४७ हजार ५ सय ७७ पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टाभित्रै ईटालीमा ३ हजार ९ सय ५१ नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । ईटाली सबैभन्दा बढि कोरोनाबाट मृत्यु हुने देशको सूचीमा पहिलो नम्बरमा छ । हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या १८ हजार ८ सय ४९ पुगेको छ । ३० हजार ४ सय ५५ निको भएर घर फर्किएका छन् । अझै ९८ हजार २ सय ७३ उपचाररत छन् । उनीहरुमध्ये ३ हजार ४ सय ९७ जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भिर रहेको छ ।
Published On: Saturday, April 11, 2020